Baro isticmaalka Tusiyaha Alligator ee Doorashada Jeebka - Pocket Option Review
Tusiyaha Alligator waa mid ka mid ah tilmaamayaasha isbeddelka ee aad si fudud u heli karto oo aad u isticmaali karto Xulashada Jeebka . Waxaad xitaa isticmaali kartaa tilmaame ku yaal koontada demo ee Option Pocket .
Tusiyaha Alligator aasaasiga ah
Tusiyaha Alligator waa tilmaame isbeddel oo adeegsada saddex sadar si loo xaqiijiyo isbeddelka. Tilmaamahan waxaa sameeyay ganacsade caan ah Bill Williams, 1995kii. Sida laga soo xigtay cilmi-baaristiisa iyo horumarintiisa, wuxuu ogaaday in suuqu u dhaqmo sida Alligator. Waxa uu aaminsanaa in suuqu aanu shaqaynayn ama hurdo 70% -80% inta soo hadhayna 20% – 30% suuqa uu firfircoon yahay. Xadhkaha tusaha marka ay is gooyaan midba midka kale waa dhibcaha iibka iyo iibinta.
Waa maxay sababta Tusiyaha Alligator
Tusiyaha Alligator waa mid ka mid ah Tilmaamayaasha farsamada caanka ah ee isticmaala celceliska dhaqaaqa siman.
Tilmaamahan runtii waa fududahay in la isticmaalo. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto dhibcaha isgoysyada ee seddexda sadar. taas oo abuurta wax iibsiga iyo iibinta fursadaha.
Tilmaamahani waxa uu quseeyaa isku dhafka iyo xidhiidhka kala fogaanshiyaha si loo dhiso calaamadaha ganacsiga iyadoo daanka uu samaynayo leexashada ugu gaabis ah iyo bushimaha samaynta leexashada ugu dhakhsaha badan.
Tilmaamuhu wuxuu siin karaa xitaa ganacsiyo faa’iido badan leh haddii loo isticmaalo tilmaamayaasha xaqiijinta isbeddelka sida taageerada iyo iska caabinta, RSI iyo in ka badan.
Sida loo dhexgeliyo Tusiyaha Alligator ee goobta ganacsiga ee Option Option
Marka hore, gal akoonkaaga Option Pocket . oo guji badhanka tilmaame. Raadi marka xigta oo dooro Tusiyaha Alligator ee liiska.
Waxaad sidoo kale bedeli kartaa midabada tusaha ama waxaad madooba kartaa khadka si aad u aragto muuqaal wanaagsan.
Sida loo isticmaalo Tusiyaha Alligator ee goobta ganacsiga ee Pocket Option
Ma heli doontid wax arrimo ah fahamka fikradda Istaraatiijiyada Tusiyaha Alligator . Fikradda waa mid aad u fudud. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto bushimaha aligator-ka. Tilmaamahan wuxuu ka kooban yahay saddex xariiq oo faruuryaha, daanka, iyo ilkaha. Halka bushimuhu ay yihiin xariiqda ugu dhaqsiyaha badan oo leh isku darka 5 SMA iyo 3 baararka, halka daanka uu yahay xariiqda ugu gaabis badan oo leh 13 SMA iyo 8 baararka. Ilkaha waa xariiqda dhexe ee isku dhafan ee SMA 8 iyo 5.
Sida loo furo iibka ganacsiga
Marka xariiqda bishimaha ay isku xirto labada xariiq ee kale xagga hoose ka dibna xariiqda dibinta ayaa ka sareysa labada xariiq ee kor u kaca. Waxay muujinaysaa isdhaafsi xoog leh oo halkan waa inaan furnaa ganacsi iibsi.
Sida loo furo ganacsiga iibka
Marka xariiqda faruuruhu ay labada xariiq ee kale ka soo baxaan xagga sare. hadhowna xariiqda dibinta waxay ku ekaataa gunta labada sadar ee kale. Waxay calaamad u tahay isbeddelka isbeddelka oo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsiga iibka.
Waxaad hadda fahantay fikradda tilmaame Alligator. Tilmaamahan waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo waxaad ka dhigi kartaa faa’iido badan isla isla. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa iskuday tusahan koontada demo ee Option Pocket oo aad u guurto Jeebka Optionka koontada dhabta ah marka aad kalsooni kugu filan tahay.
Bill williams aragti fowdo
Istaraatiijiyada tilmaame Alligator
Sida loo isticmaalo tilmaame alligator
Tilmaamayaasha Bill Williams
Previous articleIstaraatiijiyadda Oscillator-ka ugu fudud ee ugu fudud ee Pocket Option ee ganacsiyada faa’iidada leh
Next articleSidee Williams %R ee Doorashada Jeebka ay kaaga caawin karto inaad horumariso dhibcahaaga ganacsi